true organizing /zu-ZA/tools-for-life/organizing/steps/what-is-organization.html quiz 3 6 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/organizing_zu_ZA.jpg OkuyisiSekelo sokuHlela
Ngabe yini inkampani eyakhiwe ngayo? 2 Noma iyiphi inkampani yakhiwa ngabantu abaningana, ngamunye wabo onesi “gqoko” noma umsebenzi okufanele awenze. Noma iyiphi inkampani yakhiwa ngabantu abaningana, ngamunye wabo onesi “gqoko” noma umsebenzi okufanele awenze. /zu-ZA/tools-for-life/organizing/steps/organizing-and-hats.html#answer-1 Ukuhlela NeziGqoko Abaphathi kanye kweqembu labasebenzi Imishini nabantu abazama ukusebenza ngayo Abantu abaningana, ngamunye wabo onesi “gqoko” noma umsebenzi okufanele awenze Yini okufanele ibe kunoma iyiphi inkampani ephumelelayo esebenza kahle? 2 Kunoma iyiphi inkampani, kunokugeleza kwezinto kusuka kwesinye isigqoko kuya kwesinye, kusuka kumuntu kuya komunye, umsebenzi kuya komunye umsebenzi. Futhi isigqoko ngasinye noma umsebenzi enhlanganweni ukhiqiza umkhiqizo onomthelela kumkhiqizo wokugcina wenkampani. Kunoma iyiphi inkampani, kunokugeleza kwezinto kusuka kwesinye isigqoko kuya kwesinye, kusuka kumuntu kuya komunye, umsebenzi kuya komunye umsebenzi. Futhi isigqoko ngasinye noma umsebenzi enhlanganweni ukhiqiza umkhiqizo onomthelela kumkhiqizo wokugcina wenkampani. /zu-ZA/tools-for-life/organizing/steps/organizing-and-hats.html#answer-2 Ukuhlela NeziGqoko Ziningi izinto ezenzekayo futhi ezenzeka ngaso sonke isikhathi ezingxenyeni ezihlukene zenkampani. Abantu abaningi batshela abanye abantu ukuthi benzeni, ukuze bangakwenzi okungalungile. Kukhona ukuhamba kwezinto kusuka kwesinye isigqoko kuya kwesinye, kusuka kumuntu kuya komunye, umsebenzi kuye komunye umsebenzi. Futhi isigqoko ngasinye noma umsebenzi enhlanganweni ukhiqiza umkhiqizo onomthelela kumkhiqizo wokugcina wenkampani. Kukhona amakhefu amaningi nesikhathi sokuphumula, ngakho-ke akekho umuntu osebenza kanzima. Ngabe inhlangano noma inkampani idingani ukwenza imali? 2
Abantu abaningi abakwazi futhi abangacabangi ngokulandelana kwemikhiqizo edingekayo ukwenza nokukhipha umkhiqizo wokugcina noma insizakalo bese bethola ukukhokhelwa. Ngakho-ke baphelelwa imali futhi balambe.
Kuhlala kunemikhiqizo eminingi yangaphambili edinga ukukhiqizwa ngaphambi komkhiqizo uzongenisa imali.
/zu-ZA/tools-for-life/organizing/steps/organizing-and-hats.html#answer-3 Ukuhlela NeziGqoko Idinga ukwaziswa emphakathini omningi ukuthi konke kuhamba kahle kanjani. Idinga abathengisi abaningi ukuthengisa futhi nongakhathazeki nganoma yini enye. Idinga ukulandelana kwemikhiqizo edingekayo ukuyenza nokuthumela umkhiqizo wokugcina noma insizakalo bese iyayikhokhelwa. Kuhlala kunemikhiqizo eminingi phambilini edinga ukukhiqizwa ngaphambi kokuthi umkhiqizo uzongenisa imali utholakale. Vele ugxile ekwenzeni imali futhi izongena ngandlela thile.
QAPHELA: Unezimpendulo eziningana ebezingalungile. Ukuze uqhubeke, kufanele uphinde ufunde indatshana Ukuhlela NeziGqoko bese uhlola ukuqonda kwakho futhi.